Ibali lika-Axlin: elinye ibali elimnandi nguLaura Gallego | Uncwadi lwangoku
Igosa lezemidlalo laseAxlin
UJuan Ortiz | | I fantasy, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
Ibinzana nguLaura Gallego.
Igosa lezemidlalo laseAxlin ngumsebenzi woncwadi olumangalisayo ngumbhali obalaseleyo waseValencian uLaura Gallego. Yapapashwa ngo-Epreli 2018 kwaye ibekwe kwindawo ephanziswe zizilo ezinoburhalarhume. Yinoveli yokuqala yetrilogy GIiUardians zeCitadel; yigcwalise: Imfihlo kaXein (2018) kunye nomsebenzi kaRox (2019).
Ngombulelo kwimigudu yakhe, uLaura Gallego uye waba ngumqondiso wohlobo lwefantasy, okwenza uluvo olunzulu kubaphulaphuli abancinci. Ibali Iinkumbulo zikaIdhun yenye yezona mpapasho zakhe zifikelela kude, ekuthengiswe iikopi ezingaphezulu kwesigidi esi-1. EUmhlobo ka-Axlin yayimele ukubuya koloyiso kwicala lomfazi waseValencia; ibali lamkelwa kakuhle kangangokuba lanikezelwa ngo-2019 yimagazini Itempile ekwiminyango eliwaka njengeNoveli yeSizwe eBalaseleyo yeSaga.
1 Isishwankathelo se-Axlin's Bestiary
1.1 Ihlabathi elahlukileyo
1.2 Ibhinqa eliselula elikhethekileyo
1.3 Uhlobo olutsha
1.4 Incwadi malunga nezilo
1.5 I-adventure eyingozi
1.6 Isixeko esikhethekileyo
2 Idatha esisiseko yomsebenzi
4 Malunga nombhali, uLaura Gallego
4.1 Ukuzalwa kunye nendlela yokuqala kwiileta
4.2 Izifundo zeYunivesithi kunye nokupapashwa kokuqala
4.3 Umsebenzi onzima
4.4 Umsebenzi onokunyuka okungenakunqandeka
4.5 Amanye amawonga abalulekileyo athe wawafumana
4.6 Isebenza nguLaura Galler
4.7.1 Iincwadi zomntu ngamnye
Isishwankathelo se Igosa lezemidlalo laseAxlin
Abemi bommandla omkhulu mihla le bahlaselwa ngamarhamncwa awoyikekayo. Ezi zidalwa zingendawo zizinikele ekubulaleni nasekuqwengeni abantu ngaphandle kovelwano, zihlwayela uloyiko naphi na apho zidlula khona. Abantu—abaye bazincama ngenxa yeemeko ezabachaphazelayo—basoloko bengamakheswa, benocwangciso olulula olujoliswe ekuphileni ixesha elide kangangoko kunokwenzeka.
Ibhinqa eliselula elikhethekileyo
Axilineni Yiyo kanye intombazana encinci ehlala kwindawo encinci ubethwe ziintlobo ezine zamarhamncwa. Xa wayesengumntwana, wahlaselwa ngumfanekiso owaziwa ngokuba yi "knotty." Nangona ukusinda kuhlaselo, iqatha lakho wenzakala yaye ngenxa yoko waba sisiqhwala. Ukukhubazeka kwakhe akumvumeli ukuba ahambe ngokukhawuleza okanye abaleke xa ejongene nohlaselo.
Ngenxa yokuba akanako ukuzikhusela ngokukhawuleza. UAxlin ukhangela ezinye iindlela zokunceda abanye abantu. Kufana nosuku olunye unobhala welali ucela ukumfundisa ukulesa nokubhala, iza kutshintshwa kwixesha elizayo. Nangona ezi zizakhono ezibaluleke kakhulu, akukho mntu wayenomdla wokuzifunda, babezijongela phantsi; Nangona kunjalo, lavuma elo bhinqa. Kwiminyaka kamva, xa le ndoda yafayo, uAxlin waba ngumbhali omtsha we-enclave.
Incwadi malunga nezilo
Kancinci amandla akhe akhula, ngokunjalo nomdla wakhe wokwazi ngakumbi malunga nezilo. Ngalo lonke ixesha iqela libuya kuhambo, wayebabuza ngamava abo kunye neempawu zezidalwa ezikhohlakeleyo. Lonke ulwazi lwabhalwa encwadini, ukuze kwenziwe isikhokelo ukuze izizukulwana ezilandelayo zikwazi ukuzikhusela kubo.
Umdla wakhe ukhula ngakumbi xa ephawula ukuba kukho ezinye iindidi zamarhamncwa, ngoko ke wenza isigqibo esibalulekileyo. U-Axlin uthatha isigqibo sokuthatha uhambo olude ukuze aphande kwaye afumane idatha kumava akhe. Le yindlela intombazana encinci iqala ngayo i-adventure apho iya kufumana imizekelo eyingozi kakhulu. Oku kwenza ukuba izicatshulwa zakho zixabiseke ngakumbi, zibe ngumdlalo ogqibeleleyo.
Endleleni, Axlin siya kudibana abalinganiswa abatsha abaya kuba sigqibo ebomini bakhe, njenge Xein. Ngokufanayo, uya kufumanisa ukuba kukho umzi ongenazilo ebizwa ngokuba yiCitadel, ngoko igxile ekufikeni apho. Ukwenza lo msebenzi mtsha kuyamvuyisa kakhulu, kwaye ngokucinga ukuba uya kwazi ukuba ngubani kanye kanye osecaleni kwakhe. Nangona kunjalo, xa ufika "kwindawo ekhutshiweyo" uya kuqonda ukuba yayingeyiyo le nto ubuyilindele.
Idatha esisiseko yomsebenzi
I-bestiary ka-Axlin yile unayo inoveli emnandi yohlobo lwabantwana/abaselula olunezahluko ezingama-37 ezityhileka kumaphepha angaphezulu kancinane kwama-500. Ibekwe kwihlabathi elihlaselwe zizilo kwaye lahlulwe langama-enclaves. Imbali Ibaliswa kumntu wesithathu ngabalinganiswa abohlukeneyo; inomgca webali ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
Ungumlinganiswa oyintloko wenoveli. Ibali liqala njengentombazana kwaye ekukhuleni kwayo kulo lonke iploti unokuyibona indlela ekhula ngayo ngovavanyo ngalunye aluphumelelayo. Izigqibo zakhe zobulumko zimkhokelela ekubeni abe isibindi igqiyazana eliphela lisiba ngunobhala welali yakowayo, ngenxa yoko uthatha isigqibo sokwenza umsebenzi onzima nobalulekileyo ekuthandeni abanye abahlali: ukucacisa i-bestiary.
Ungomnye umlinganiswa oyintloko webali umbhali anikezela kuye izahluko ezininzi. Ungumfana ohlala nomama wakhe kwenye yeenclaves, bobabini bodwa de kufike uAxlin. Ubomi bakhe buthatha utshintsho olukhulu ekubeni yinkwenkwe enesithukuthezi ukuba ibe ngumnqweno weqela elibizwa ngokuba "Abagcini."
Malunga nombhali, uLaura Gallego
Ukuzalwa kunye nendlela yokuqala kwiileta
ULaura Gallego García wazalwa ngoLwesibini, ngo-Oktobha 11, 1977 kumasipala waseValencian weQuart de Poblet eSpain. Ukususela ebuntwaneni ebethanda uncwadi, ubungqina boku kukuba Kwiminyaka eyi-11, kunye nomhlobo wakhe, waqala ukubhala incwadi yefantasy. Kwathatha iminyaka emithathu ukuwenza, yaye ekugqibeleni yaba libali elimalunga namaphepha angama-300 elibizwa ngokuba libali Zodiacía, ihlabathi elahlukileyo, kodwa abavakalisanga.
Izifundo zeYunivesithi kunye nokupapashwa kokuqala
Emva kokugqiba izifundo zesekondari, wabhalisa kwiYunivesithi yaseValencia, kwi-Hispanic Philology career. Ngela xesha, ULaura wayesele ebhale iincwadi ezili-13, zonke zithunyelwe kubapapashi kunye nokhuphiswano, kodwa akazange akwazi ukupapasha. Kwade kwafika inombolo ye-14, UFinis Mundi (1999), umsebenzi apho umbhali waphumelela ibhaso Barco de Vapor evela Editorial SM.
UGallego waqhubeka nokubhala engayeki, umsebenzi wakhe olandelayo yayiyitetraloji IziKronike zeNqaba (2000). Kwakhona wapapasha imisebenzi yomntu ngamnye, njenge Buyela kwi-White Island (2001) kunye neentombi zaseTara (2002). Ngo-2003 waphinda wawongwa ngembasa yonyaka evela kuHlelo lweSM, nge La intsomi yokumkani obhadulayo. Le mpumelelo ilandelwe yeminye imisebenzi efana nale: Umqokeleli weewotshi ezingaqhelekanga (2004).
Umsebenzi onokunyuka okungenakunqandeka
Ukusuka apho, Umsebenzi woncwadi uye wakhula, ngokunikezelwa kweencwadi ezininzi ezizimeleyo kunye neesagas ezintlanu. Phakathi kokugqibela sinokukhankanya iitrilogies Iinkumbulo zikaIdhun (2004) kunye AbaGcini beCitadel (2018). Ngokukwanjalo, uGallego uye wangena kudidi lwenyani yoncwadi nolu ngcelele sara y abafaka amanqaku, eneencwadi ezi-6.
Ngumsebenzi wakhe omkhulu wokubhala, iValencian ipapashe iinoveli ezingaphezu kwamashumi amane - iphupha, uninzi - kwaye iguqulelwe kwiilwimi ezininzi.
Amanye amawonga abalulekileyo athe wawafumana
UCervantes Chico woLutsha loNcwadi (2011)
Uncwadi lwaBantwana noLutsha lweSizwe ngowama-2012 ngu Apho imithi icula khona (2011)
Imaginamalaga 2013 ngu INcwadi yeePortal (2013).
Isebenza nguLaura Galler
Isicatshulwa nguLaura Gallegog
Iincwadi zomntu ngamnye
UFinis Mundi (1999)
Buyela kwi-White Island (2001)
Iphupha likaPosi (2001)
Iintombi zikaTara (2002)
Uphi u-Alba? (2003)
Ibali loKumkani obhadulayo (2003)
Isiporho ekubandezelekeni (2004)
UMax akasakuhleki (2004)
Ntombi yasebusuku (2004)
Umqokeleli weewotshi ezingaqhelekanga (2004)
UAlba unomhlobo okhethekileyo (2005)
I-empress ye-ethereal (2007)
Amakhandlela amabini omtyholi (2008)
Apho imithi icula khona (2011)
Incwadi yamasango (2013)
Zonke iintsomi zobukumkani (2015)
Xa undibona (2017)
Kuba rose (2017)
Yonke into onokuyiphupha (2018)
Umjikelo womlawuli ongunaphakade (2021)
Intlambo yeeNgcuka (2000)
Isiqalekiso seNkosi (2001)
Umnxeba wabafileyo (2002)
Fenris, uElf (2004)
Ubathathu emnye (2005)
USara kunye neeGoleadoras:
Ukudala iqela (2009)
Amantombazana ngamagorha (2009)
Abona manqaku aphezulu kwiligi (2009)
Ibhola ekhatywayo kunye nothando azihambelani (2010)
Amanqaku akancami (2010)
Injongo yokugqibela (2010)
Umlingo ngamathamsanqa (2012)
Amaqhawe ngamathamsanqa (2016)
Igosa lezemidlalo laseAxlin (2018)
Imfihlo kaXein (2018)
Umsebenzi kaRox (2019).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Igosa lezemidlalo laseAxlin
Amara Castro Cid. Udliwano-ndlebe nombhali Ngale nto kunye nekeyiki
EyeNkanga. Ukukhethwa kwezinto ezintsha